I-china Dongshen wholesale makeup sponge latex-free oblique cut drop-shaped foundation is loose powder makeup beauty sponge blender Umkhiqizi nomhlinzeki | UDongmei
I-Dongshen wholesale makeup sponge latex-free oblique cut drop-shaped foundation is loose powder makeup beauty sponge blender
I-Dongshen professional makeup sponge blender, i-pink cut-shaped oblique cut, i-latex-free makeup sponge blender yenziwe ngezinto ze-PU, ingasetshenziselwa kokubili okomile nokumanzi, akukho powder, i-makeup izwa intekenteke futhi ilungele isikhumba, akukho ukucasuka esikhunjeni .
● Isipanji se-Makeup siphelela ukwakheka okuphelele: okuphezulu okukhonjiwe ukuze kusetshenziswe kalula emehlweni, ezindebeni nasekhaleni, kuyilapho ingxenye engezansi yezihlathi, ebunzini nezinye izingxenye. Kuyinto enhle futhi elula ukuyiphatha, ilungele ukusetshenziswa kwasekhaya, ukuhamba.
● I-makeup sponge blender yazo zonke izinhlobo zezimonyo, isisekelo, i-BB cream, i-powder, i-concealer, i-isolation, i-liquid, njll.
● Lesi sipanji senziwe ngezinto zekhwalithi ye-PU, umuzwa othambile, obekelwe abantu abajwayelekile, onobungane esikhunjeni sakho.
● Isicelo Esiphelele: Isipanji sobuhle se-makeup sikunikeza uhlelo lokusebenza oluphelele lwe-makeup, gwema ukumosha izimonyo.
● Imanzi futhi yomile: isiponji esixubayo siba sikhulu uma simanzi, sidabule ngokulingana ukuze wakhe izimonyo ezinhle.
● Iyasebenza futhi ihlala isikhathi eside: Kulula ukuyihlanza futhi uyome. Siphakamisa ukuthi uyihlanze njalo emva kokusebenzisa ngakunye bese ufaka isipanji sakho sesipanji njalo ezinyangeni ezi-2, ungalokothi uphuthelwe ukubhampa.
Ithambile futhi i-Bouncy
Indaba eyingqayizivele yenza iDongshen isipanji se-blender i-bouncy futhi ithambile, eduze nokunethezeka kwesikhumba.
Isipanji esithambile kakhulu sikunikeza ukuhlangana okubushelelezi nokulinganayo, okuqinisekisa uhlelo olungenabala nolungenakuphikiswa ngemfucumfucu yomkhiqizo omncane.
Ukuphinda kabili ngosayizi lapho kumanzi
Cwilisa ngokuphelele isiponji sobuhle se-Dongshen, khama amanzi amaningi, uzokhula ube usayizi ophindwe kabili emva kwamanzi.
Le emanzi izomunca izimonyo zakho eziyintandokazi, futhi uzozizwa unwebekile futhi uthamba.
Kuyindlela enhle ukushiya ukubukeka kwemvelo futhi okusha.
Ukusetshenziswa Okumile Nokumanzi Okumile
Ukusetshenziswa okomile: ilungele ukwakheka kwe-powder, okufana ne-blush, i-powder evulekile, okugqamisa, njll.
Ukusetshenziswa okumanzi: okulungele ukwakheka ketshezi, okufana ne-BB cream, concealer, liquid foundation, njll.
Faka isicelo se-liquid ebusweni, sebenzisa isiponji esimanzi ukubamba ngokulinganayo ngohlelo lokusebenza olungenaphutha. Uma wenza iphutha, sebenzisa isiponji esomile ukususa noma yiziphi izimonyo ezeqile kalula.
Ungayihlanza kanjani isipanji sokwenza izimonyo:
Qiniseka ukuthi uhlanza isipanji ngamanzi afudumele njalo emva kokusebenzisa ngakunye ukuvimbela ukusabalala kwamagciwane.
Ungawusontisi umkhiqizo lapho uhlanza umkhiqizo. Cindezela amanzi ngobumnene ngesandla ukuze uvimbele isipikili ekuklwebheni isiponji.
2.Faka inani elincane lokuhlanza kuso, bese ugcoba ngesineke usebenzisa iminwe ukukhipha okusele kokwenza izimonyo.
3. Hlanza isiponji ngaphansi kwamanzi agobhozayo kuze kuphele amanzi.
4 .Khama noma yimuphi umswakama okweqile nomoya uwomise.
Sicela ushintshe isiponji sakho izinsuku ezingaba ngu-30 ukuze ube nempilo enhle.
Langaphambilini I-Dongshen professional makeup sponge drop shape shape latex-free PU foundation makeup beauty sponge blender
Olandelayo: Umkhiqizi webhulashi le-Dongshen makeup wholesale okunethezeka kwezimbuzi uboya ithusi ferrule grey isibambo sokhuni sokwenza ibhulashi setha amathuluzi wokwenza
Isitolo esidayisa yonke impahla Ubuhle Blender Sponge
Ukugunda Izinwele, Ukushefa Setha, Ithuluzi Brushes Brushes, Setha i-Makeup Brushes, Yenza amabhulashi, isethi yokwenza ibhulashi,